Alakamisy, Jolay 12, 2018 Alakamisy, Jolay 12, 2018 Douglas Karr
Ianao ve mitady mailaka lasibatra iray nefa tsy fantatrao ny fomba hahatratrarana azy ireo? FindThatLead dia manana tahiry feno momba ny adiresy mailaka sy ny interface mba hangataka sy hisintona azy ireo ho an'ny prospecting. Ara-dalàna ve? Raha ny marina, eny. Ireo mailaka rehetra dia novokarina niaraka tamin'ny algorithm FindThatLead mifototra amin'ny lamina, na hita amin'ny tranokalam-panjakana amin'ny alàlan'ny tranonkala. Ahoana ny fomba fiasan'ny FindThatLead Prospector misafidy fizarana - Misafidiana eo anelanelan'ny miovaova samihafa mba hahalalanao ny fikarohana